Isihloko ubudlelwano phakathi izizukulwane kumba eqolo. Kodwa kukhona yezimbangela ezivame kakhulu ukungqubuzana amaphuzu adinga ukunakekelwa okukhethekile. Kungakhathaliseki ukuthi uqaphele nokuqonda kungenzeka abazali, futhi kungakhathaliseki izingane, ludvweshu, maye, kungagwenywa kanjani kanzima. Lena lithathelwe isinyathelo yokuqala wonke amalungu omkhaya. Ngakho, kungani kukhona izingxabano phakathi kwabazali nengane.
izizathu ezingase kokubili jikelele, kanye ethize ephathelene ne Psychology ubudlelwane labangani asondelene nabo. Ngakho kungani kuvela izingxabano phakathi komzali nengane? Okuningi kuxhomeke ezicini zobuso nokuxhumana yokutholwa umndeni.
Kukhona uhlobo ubuhlobo liyavumelana, kanye okuphambene layo. Esimweni sokuqala emkhayeni kwakhiwa nomqondo reciprocity, wonke umuntu uyazi indima yabo futhi isondelene ohlangothini olufanayo kocingo. uhlobo Disharmonious elinesimo imodeli engakhi ubudlelwane phakathi abashadayo. Ukuxhumana senzeka nge ukuhlaselwa, Izinsolo nezinkulumo indelelo ezifihliwe noma ezikhuluma ingcaca ngobulili. Izingane emndenini ekuqaleni zikhula ngomuzwa ukukhathazeka kancane.
Ukungqubuzana ku ngemuva izindlela zokufundisa: overprotection futhi enqabela
Ukungqubuzana phakathi kwabazali nengane ngokuvamile kwenzeka ngokumelene isizinda izindlela imfundo, okuyinto nebutho elimazayo. Isici zalokhu, okokuqala kunakho konke, umehluko phakathi ubaba nomama on ezisemqoka. Ngokwesibonelo, omunye umzali usuke uvinjelwe nje ingane ukudla candy, ngesikhathi esifanayo inikeza yesibili baphikelele. Lokhu ukuguquguquka akugcini ngokuletha umuzwa ukuntula ulwazi mayelana izingane, kodwa futhi ukuba izingxabano phakathi abadala. Lapho senza izindlela ebhubhisayo zihlanganisa enqabelo futhi overprotection, nabaqashi abafuna okungaphezu ezintweni esizifinyelele zezingane, kanye njalo uqhathanisa nabanye. impumelelo amazinga Kunconywa ukusetha emkhayeni, kanye nezindlela zokukhuthaza. Khona-ke abantwana bakwa uyomenzela umqondo ngokufanele yangempela amagugu ukuphila nezinto ezaziza kuqala kuye.
Nezinkinga kweminyaka ethize kukhona isizathu esenza kuvela izingxabano phakathi kwabazali nezingane. Izibalo izimo ezinjalo idlula 80%. Phakathi nenkathi yenguquko, umntwana uzama wokubukeza isimiso amagugu, okuyinto vele uye wazakhela kule minyaka engu ingxenye. Izinkinga senziwe onyakeni wokuqala, wesithathu futhi kweziyisithupha zokuphila, phakathi nenkathi yokuthomba, eselusa iimbotjhwa ezisebenza emphakathini iminyaka engu-14, futhi entsheni ububanzi - kuze kufinyelele 18.
Ngamunye wabo has izici zayo siqu okuqonda zomhlaba zangaphandle kanye nokuchazwa etimeni letehlukene. Ingane iqala ukudlubulunda ezimweni eyayingazange inselele.
izici Siqu kanye nezinhlobo ubudlelwano
Ukungqubuzana phakathi kwabazali nengane ngokuvamile kuphakama ngenxa izici siqu. Okuvame kakhulu iyona conservatism isizukulwane amadala. Akunjalo Empeleni bokuba khona kwakhe. Lezi zihlanganisa ukwenqena ukuqonda entsha, ukulalela umbono siqu izingane, ngenxa yalokho - abagcinanga umbonwabo. Nakuba abazali ekuphenduleni owafuna kokulalela ngokungathandabuzi nokuthembela ngokumhlonipha kwabo kweminyaka eminingi isipiliyoni. Lokhu kuyafana lokho okushiwo yini iphutha omdala esiyingqayizivele. Ngokuhamba kwesikhathi, kuzobangela impendulo ehambisana. Yingakho kukhona izingxabano phakathi kwabazali nezingane.
Yeka indlela ukuxhumana ngabameli izizukulwane ezahlukene kungabonakala ngokucacile ku izinhlobo ubudlelwano phakathi abadala, okuyinto zihlukaniswe zibe:
• kahle lapho bonke abantu abajabule kuze kufike isimo sivuma.
• adingekayo lapho abazali unesithakazelo ezindabeni zezingane, nalabo, zibuye kucocela imicabango yabo.
• Single noma awayiphazamisi. Kulokhu, iningi labantu abadala ukwenza njenge ezintweni ukhuluma izindaba esizukulwaneni esisha. isixhumanisi okuhambisanayo Yenziwe umqondo ngoba befuna ngibenzele okuthile.
• indiva. Lapho Izingane ziyajabula ukwabelana izithakazelo zabo, kodwa ukubuya uthola kubazali abanganaki. ibinzana ngokuvamile "ukuze ungabonisa entsha" futhi izinto abanjalo.
• Uma ukuphila abasebasha imbangela yezingxabano. Kulokhu, ilungelo ukunikeza abadala.
• Uma kukhethwa asemasha okufanele kumkhathaze izingxabano nabazali, kanti izingane baqinisile.
• bambalala Mutual lapho akekho obonisa isithakazelo ezindabeni omunye. Izingane nabazali zivame baphoqeleka ukuba bahlale kuyo leyo nsimu efanayo, njengoba kulokhu, eqinisweni, abangabazi.
Kungani kunezinkolo eshayisana phakathi komzali nengane? Ngenxa intsha nokuziphatha kwabo. Lapha, eqinisweni, kunjalo elula cha. Intsha Nama-abazali bayinqoba, ngokuhambisana lezi zinhlobo ezilandelayo:
• Senior njalo ukukhulisa ibha okuphumelela ngomntwana, wagcina ukhathele yokulwela ubuqhawe.
• Sverhzabota ebonakaliswa ukunakekelwa ngokweqile futhi zilekelele abazali kuyo yonke imikhakha yokuphila.
• ukulawula obuphelele, bizela ukuthatha abazali nokuncane ukuzimela ingane.
• Igunya, lapho wonke umuntu usuke ezama ukufakazisa ukuthi icala labo, kungakhathaliseki ukuthi kuthatha.
Ngokuvamile izingane ngayo ukuziphatha elandelayo: ngxabano, ukungalaleli, nokuntula ukwahlukanisa.
Experience - lokhu kubalulekile
Thina esiphethweni kungani kukhona izingxabano phakathi kwabazali nezingane. Yiziphi izindlela ukugwema izimo ezinjalo? Mhlawumbe, izincomo ezifana abakwazi ukunikeza noma yimuphi sokusebenza kwengqondo oqeqeshiwe. Iqiniso lokuthi izimo ezinjalo neqhaza ukuvela nakho ezithile, okuyinto ebaluleke kakhulu ukuze kwakhiwe ubuntu agcwele. Ukuvimbela izifundo ezibalulekile akufanele, futhi ngeke sisebenze, ngisho nge sinesifiso esikhulu.
Ukwenza kube lula ukuzwa izici zemvelo, kufanele kubhekwe sezizathu ezinkulu zokuthi kungani kuvela izingxabano phakathi kwabazali nezingane. Abeve zingaxazululeka - umbuzo oyithandayo eziningi. Bazizuzise futhi wonke umkhaya kungaletha, uma sibona kuwukuphikisana ezivukayo ukuthuthukiswa njengoba evamile okunempilo ubudlelwane. Asikho isidingo phikisana, kungcono ukulalela iphuzu yomntwana umbono nokuchaza wakhe. Lokhu kuyoba inkhulumomphendvulwano, hhayi inkulumo-mpikiswano. Uma izingane namanje encane ngokwanele, kufanele ubuyekeze uhlelo yayo enqabelo.
Udinga esikhundleni "cha" "ake uzame noma kunjalo." Izingane kufanele okuthile iyakwenqabela kuphela uma ingozi noma ukungabi nakwenzeka kwento okwenzekayo. Zonke ezinye isimo zingaxazululeka ngokuthula. Kulesi indlela, eyodwa njalo ukuthola impendulo yombuzo othi kungani kuvela izingxabano phakathi kwabazali nezingane. Indlela ukuzixazulula, mina kufanele atshele isipiliyoni eminyakeni edlule.
Lalela ingane yakho
Uma ingane abazali samanje babengavunyelwe banombono ke ingane yakho kumelwe ushintshe kakhulu kulesi simo. Sidinga ukuzwa ingane yakho siqu. Khona-ke kufanele ungakhathazeki ngezidingo zakhe unmet, ngoba umama nobaba ngeke wazi ukuthi yini edingekayo ngempela.
Ngaphambi cela othile kungani kukhona izingxabano phakathi kwabazali nengane, kufanele abuze lo mbuzo abazithandayo. Kumelwe uzibeke endaweni asemasha, vulela ingqondo yakho into entsha. Yikhona kufanele indawo okukhethayo inikezwe izingane. Kubalulekile uhambisane mayelana ingane yabo, okungukuthi, ukuba agcine izithembiso.
Nizhny Novgorod College (Polytechnic): okukhethekile futhi engenayo imithetho